ရောင်းရန်နှင့် RealtyWW အပေါ်ငှားယူနစ်
အိမ်ခြံမြေ Listings: လူနေအိမ်အိမ်များ ယူနစ်
1 - 10 စာရင်းများ၏ 25
sorting ကို Select လုပ်ပါ
အသစ်စာရင်း နိမ့်သောစျေးနှုန်းပထမဦးဆုံး ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းပထမဦးဆုံး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - 'Is as, Where'
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသိသိသာသာ - 'ဘယ်မှာလဲ၊
ရောင်းမည် |6ကုတင် |2ဗတ်
ကြည့်ရှုခြင်း ယူနစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့်
အကူအညီ - ပိုင်ရှင်ရောင်းရန်လိုအပ်သည် !!
ရောင်းမည် |2ကုတင် | 1 ဗတ်
Southport၊ Queensland ရှိရောင်းရန်ယူနစ်
steel ည့်ခန်းနှင့်လသာဆောင်တို့အကြားမိုးလုံလေလုံ / ပြင်ပစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောသံမဏိပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောမီးဖိုချောင်။ living ည့်ခန်းသည်အရွယ်အစားကြီးမား။ အလင်းရောင်၊ အဖြစ်အပျက် ...
ရောင်းမည် | 1 ကုတင် | 1 ဗတ်
ကြည့်ရှုခြင်း ယူနစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ2months ago
Queensland ရှိ Broadbeach ရှိရောင်းရန်ယူနစ်
ယခုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးသွားသောအခါအကုန်အကျခံစရာမလိုပါ၊ ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြေညီထပ်တိုက်ခန်းသည်သင့်အတွက်အပန်းဖြေရန်ကမ်းခြေဘေးတွင်နေထိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်ကဖေး၊ စတိုးဆိုင်နှင့်ဖလားကလပ်နှင့်ကင်းလှည့်ထားသောကမ်းခြေသို့မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာလမ်းလျှောက်ရင်း Broadbeach အနားယူမည်
ရောင်းမည် |2ကုတင် |2ဗတ်
ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် Mooroolbark ရှိရောင်းရန်ယူနစ်
ဤသည်ကားရပ်နားရန်နေရာလွတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကားဂိုထောင်ကြီးတစ်လုံးပါသောတစ်ထပ်အဆောက်အအုံတစ်ခုအားလုံခြုံရန်ဖြစ်သည်။ အငြိမ်းစား, စုံတွဲများ, ဆိုရင် single သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှဆွဲဆောင်။ ရထားဘူတာနှင့်ကဖေးများနှင့်စည်ကားနေသောဗဟို Mooroolbark သို့လမ်းလျှောက်ရန်အလွန်တိုတောင်းသောလမ်းလျှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Queensland ရှိ Little Mountain တွင်ရောင်းရန်ယူနစ်
ဤလှပပြီးလေအေးပေးစက်အိမ်သည်အလွန်ကောင်းသောအခြေအနေတွင်ရှိပြီးသုံးစွဲရန်ငွေတစ်ရာမျှမပါ။ ..... စင်ကြယ်သန့်ရှင်းပြီး NOW သို့ပြောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ !! အိမ်သည်ကျေးရွာ၏သီးသန့်နှင့်တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်တည်ရှိပြီးအမျိုးအစားခွဲပြီးနောက် Empress Home Park၊ Little Mountain၊ Caloundra ။ အိပ်ခန်း ၂ ခန်းနှင့်ရုံးခန်းတစ်ခန်း၊
ရောင်းမည် |3ကုတင် | 1 ဗတ်
ကြည့်ရှုခြင်း ယူနစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ3months ago
Kangaroo Point၊ Queensland ရှိရောင်းရန်ယူနစ်
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော Peninsula Apartments အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီးဤနေအိမ်သည် Brisbane City နှင့်ကျော်ကြားသော Kangaroo Point မြစ်ကမ်းဘေးရှိမြစ်ကမ်းနားတွင်ရှိသည်။ အမြဲတမ်းမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းမြင်ကွင်းမြင်ကွင်းကျယ်နှင့်အရှေ့မြောက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုထောင့်များသည် the ည့်,ရိယာများ၊ အဓိကအိပ်ခန်းနှင့် brilli များမှမျက်စိကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
6 ယူနစ်,6ဝင်ငွေများ
ရောင်းမည် |6ကုတင် |6ဗတ်
ကောင်းမွန်သောနေထိုင်ရန်အလွန်ကြီးသော ၀ ယ်ခြင်း
ကောင်းမွန်သောနေထိုင်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသော ၀ ယ်ခြင်း
60 ကျော်ရဲ့ယူနစ် - ဤတစ်ခုစက်ဝိုင်း!
တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါနေရာထိုင်ခင်း အားလပ်ချိန်မှာအခန်းပေါင်းလူနေအိမ်အိမ်များ အိမ်များ တိုက်ခန်းများ ပြားသော အခန်းပေါင်း ကွန်ဒို မြို့တွင်းစုပေါင်း ယူနစ် စတူဒီယို Villas အိမ် ဘန်ဂလို အိမ်တွေ Foreclosed နေအိမ်မြေယာအမြောက်အမြား လူနေအိမ်မြေ စိုက်ပျိုးရေးမြေ စက်မှုမြေကားဂိုဒေါင်နှင့်ကားရပ်နားသောနေရာများ ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် ကားရပ်ရန်နေရာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အိမ်ခြံမြေ ဟိုတယ် Office ကိုနေရာများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဥပစာ အခမဲ့ချိန်း၏အဆောက်အဦးများ စက်မှုဝုဏ် ဂိုဒေါင်နေရာအားလုံးအခြားသူများအိမ်ခြံမြေ အားလုံးအခြားသူများအိမ်ခြံမြေ ဂေဟစနစ်အိမ်ရာ ဂြိုဟ်သား Real Estateစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ဘဏ္ဍာရေး Service Providers Moving ကုမ္ပဏီများ မူလစာမျက်နှာတိုးတက်မှုကန်ထရိုက် မူလစာမျက်နှာစစ်ဆေးရေးန်ဆောင်မှုများ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ ပျော်စေကန်ထရိုက် ဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများ ပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှု ပရိဘောဂကုမ္ပဏီများ အာမခံန်ဆောင်မှုများ ဓါတ်ပုံပညာန်ဆောင်မှုများReal Estate Agent Directory ကို အိမ်ခြံမြေကိုယ်စားလှယ် အိမ်ခြံမြေပွဲစား အိမ်ခြံမြေ Analytics မှ အိမ်ခြံမြေမန်နေဂျာများ အိမ်ခြံမြေအတိုင်ပင်ခံ
Post ကို Code ကို:
အဟောင်းကို2ရက်ပေါင်း
အမှားကြေးပေးသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းရှိခဲ့သည်! သငျသညျမမှန်ကန်ကြောင်း format နဲ့အီးမေးလိပ်စာထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသို့မဟုတ်သင်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ဝင်. မရခဲ့ပေ။
A ယူနစ် တဦးတည်းအိမ်ထောင်စုများ၏လူနေမှုရပ်ကွက်မှအိုးအိမ်နှင့်ညီမျှ၏အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရာကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာသြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်, ထိုစကားလုံးက "ယူနစ်" တွင်ဘုံမိန့်ခွန်းမှာ, ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးတိုက်ခန်းများ၏အုပ်စုတစုတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို Multi-ထပ်အဆောက်အဦး (တစ်ဦး '' တိုက်ခန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု ') တွင်ပါရှိသောသည်အဘယ်မှာရှိတိုက်ခန်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုဆိုလို villa ယူနစ်သို့မဟုတ်နေရာအရပ်ရပ်၏အုပ်စုတစုများသောအားဖြင့်တစ်ဦးသည့်ကားလမ်းတဝိုက်စီစဉ်ပေးတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတစ်ခုတည်းထပ်တိုက်အဆောက်အဦးများအတွက်ရှိရာနေအိမ်ယူနစ်။ ထို့နောက်တစ်ဦးယူနစ်ပုံမှန်အားဖြင့်, ပူးတွဲ Semi-detach လုပ်လိုက်သောသို့မဟုတ် detach လုပ်လိုက်သောအလားတူနေရာအရပ်ရပ်၏အုပ်စုတစုအတွင်းစေခြင်းငှါအရာကျိုးနွံစကေး၏အခန်းပေါင်းတစ် Self-ပါရှိသော suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုပါကလည်းကျိန်းဝပ်များအတွက်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကအခန်းယူနစ်ထက်ပိုလေ့မဟုတ်ရင်တစ်လူပျို ROOM တွင်နေထိုင်မှုသို့မဟုတ် North America မှာတွင် SRO အဖြစ်လူသိများ, ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ် bedsitter တစ်ဦးစတူဒီယိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာတိုက်ခန်းသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းများအဖြစ်ရည်ညွှန်းရှိသူများအနေဖြင့်ယူနစ်အဖြစ်အချို့သော Multi-နေသောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုခွဲခြား attributes အတိအကျအဘယ်အရာကိုပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုဟူသောဝေါဟာရကိုတစ်လူတန်းစားအတိုင်းအတာလည်းမရှိအကြံပြုထားသည်။ ကနေဒါမှာတော့အမျိုးသားစာရင်းအင်းအေဂျင်စီစာရင်းအင်းကနေဒါ, သူတို့ပြီးနောက် "နေသောယူနစ်" အဖြစ်လူသိများကြသည်နှင့်တအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းမှအညီအမျှရညျညှနျးနိုငျသောအမှု၌အသီးအသီးသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှာနိုင်ငံတွင်းရှိပုဂ္ဂလိကနေရာများ၏အရေအတွက်ကိုမှတ်တော်မူ၏။ နေ့စဉ်ကနေဒါအင်္ဂလိပ် "ယူနစ်" တွင်တိုက်ခန်းများနှင့်ကွန်ဒိုတစ်ခုထီးဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်။